XtraBYtes စျေး - အွန်လိုင်း XBY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို XtraBYtes (XBY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ XtraBYtes (XBY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ XtraBYtes ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 759 260.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ XtraBYtes တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
XtraBYtes များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
XtraBYtesXBY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0343XtraBYtesXBY သို့ ယူရိုEUR€0.0289XtraBYtesXBY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0261XtraBYtesXBY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0313XtraBYtesXBY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.308XtraBYtesXBY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.215XtraBYtesXBY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.761XtraBYtesXBY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.128XtraBYtesXBY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0457XtraBYtesXBY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0475XtraBYtesXBY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.769XtraBYtesXBY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.266XtraBYtesXBY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.183XtraBYtesXBY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.57XtraBYtesXBY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.79XtraBYtesXBY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.047XtraBYtesXBY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0514XtraBYtesXBY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.07XtraBYtesXBY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.239XtraBYtesXBY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.62XtraBYtesXBY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩40.65XtraBYtesXBY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦13.01XtraBYtesXBY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.52XtraBYtesXBY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.951
XtraBYtesXBY သို့ BitcoinBTC0.000003 XtraBYtesXBY သို့ EthereumETH0.00009 XtraBYtesXBY သို့ LitecoinLTC0.000576 XtraBYtesXBY သို့ DigitalCashDASH0.000338 XtraBYtesXBY သို့ MoneroXMR0.000363 XtraBYtesXBY သို့ NxtNXT2.44 XtraBYtesXBY သို့ Ethereum ClassicETC0.00477 XtraBYtesXBY သို့ DogecoinDOGE9.55 XtraBYtesXBY သို့ ZCashZEC0.000357 XtraBYtesXBY သို့ BitsharesBTS1.32 XtraBYtesXBY သို့ DigiByteDGB1.24 XtraBYtesXBY သို့ RippleXRP0.112 XtraBYtesXBY သို့ BitcoinDarkBTCD0.00115 XtraBYtesXBY သို့ PeerCoinPPC0.121 XtraBYtesXBY သို့ CraigsCoinCRAIG15.27 XtraBYtesXBY သို့ BitstakeXBS1.43 XtraBYtesXBY သို့ PayCoinXPY0.585 XtraBYtesXBY သို့ ProsperCoinPRC4.2 XtraBYtesXBY သို့ YbCoinYBC0.00002 XtraBYtesXBY သို့ DarkKushDANK10.74 XtraBYtesXBY သို့ GiveCoinGIVE72.51 XtraBYtesXBY သို့ KoboCoinKOBO7.5 XtraBYtesXBY သို့ DarkTokenDT0.0316 XtraBYtesXBY သို့ CETUS CoinCETI96.68